Interior paint, Exterior paint services in Myanmar - Colorful Myanmar Paiting
Colorful Myanmar Paints
About us ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
CMP (Colorful Myanmar Paints) group has been servicing varieties of interior and exterior painting services including house painting, apartment painting, office painting, hotels, restaurants, supermarkets, residential and commercial buildings, factories and much more.
We believe in the quality service that deliversaperfect customer's satisfaction. We do our work with passion and perfection thus you will be amazed at our service regardless the size of your projects. CMP always carry out cost-effective and quality painting services all the time.
Choosing the right colors is foremost important to your daily life since it unconsciously influences your mind and behavior in psychological ways. Don't worry, we are experts and we can advise you choose the right themes and colors at your surroundings.
We will want to under promise, but over deliver to you. So, call us now to get the "FREE QUOTATION" for your painting needs.
CMP (Coloful Myanmar Paints) သည် Residential/ Commercial ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို အတွေ့အကြုံပြည့်ဝသော ဆေးသုတ်ဝန်ထမ်းများဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝစွာ ရက်ချိန်းအတိအကျ အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
အဆောက်အဦး၊ အိမ်တွင်း၊ အိမ်ပြင်၊ အထပ်မြင့် တိုက်ခန်းများ၊ ဆိုင်ခန်း၊ ရုံးခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ စူပါမားကက်များ၊ ခြံဝန်းကျယ်သီးသန့် အဆောက်အဦးများ၊ စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ အားလုံးကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။
မိတ်ဆွေတို့၏ လိုအပ်ချက်များကို အထူးအလေးထား၍ သုံးချင်သောဆေးအမျိုးအစား၊ သုံးစွဲမည့် ဘက်ဂျက်ပမာဏပေါ်မှာမူတည်၍ အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်များကိုလဲ ဆွေးနွေးပေးပါတယ်။ အပြောနှင့်မဟုတ် အလုပ်နှင့် သက်သေပြမှာဖြစ်သည့်အတွက် "CMP ဆိုရင် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများထက် ကောင်းသတင်းဖြင့် အမှတ်ရနေစေရမည်။"
အခုပဲဆက်သွယ်၍ "FREE QUOTATION" တောင်းလိုက်ပါ။
: No: 346B Pyitharyar Street, 16/3 Ward, Thingangyun Township, 11071. Yangon, Myanmar. အမှတ် ( ၃၄၆-ဘီ)၊ ပြည်သာယာလမ်း၊ ၁၆/၃ ရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
: 0978 5171862 0951 71862
၀၉၇၈ ၅၁၇၁၈၆၂ ၀၉၅၁ ၇၁၈၆၂
: Colorful Myanmar Paints
ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံများ ဆေးသုတ်ခြင်း ဝန်ဆောင်မှု
Copyright © Colorful Myanmar Paints 2021, All Rights Reserved